War deg deg ah:Xildhibaanada Baarlamanka Soomaaliya oo ansixiyey heshiiskii Kampala – SBC
War deg deg ah:Xildhibaanada Baarlamanka Soomaaliya oo ansixiyey heshiiskii Kampala
Posted by editor on July 11, 2011 Comments
Xildhibaanda Baarlamaka KMG Soomaaliya ayaa cod aqlibyad leh ku ansixiyey goor dhaweyd heshiiskii magaalada Kampala ee ay bishii qalinka ku duugeen madaxweynaha & Gudoomiyaha Baarlamanka.
Kulankan oo uu shir gudoominayey Gudoomiyaha Baarlamanka Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta amaankiisa aad loo adkeeyey, waxaana la dhigay ciidamo fara badan goobta uu shirku ka socdey, waxaa kulanka maanta uu ka duwanaa kii shaley oo ku soo dhamaaday buuq & fawod.
Saaka markii uu bilowdey kulankaasi waxaa xildhibaanada laga codsadey in laga doodo qoraalkii heshiiska Kampala ee shaley loo qaybiyey, waxaana bilaabatey dood arinkaasi ku aadan oo ay xildhibaanadu si saraaxad leh uga doodayeen heshiiskaasi.
Markii doodaasi dhamaatey ayaa Shariif Xasan Sheekh wuxuu codbaahiyaha uga sheegay xildhibaanada inay u codeeyaan heshiiskaasi, isagoo sheegay in cod gacan taag ah loo qaadayo codeynta.
Fadhigii saaka ee ay ku yeesheen xaruntooda xildhibaanadu waxaa soo xaadiray 436 xildhibaan waxaana codka ogolaanshaha gacan taag ku ansixiyey heshiiskaasi 393 xildhibaan waxaa diidmo gacan taag ah kaga soo horjeestey 36 xildhibaan waxaa ka aamusay 7 xubnood.
Xildhibaanada Baarlamanka ee soo xaadiray kulankaasi maanta ayaa ahaa kuwa jawigoodu uu ka deganaa sidii shaley iyadoo shaley caro xoogan ay muuqatey ayna ka qabeen heshiiskii Kampala, waxaase maanta laga dareemayey xasarad la’aan, taasi oo loo fasarin karo in Madaxweynaha & Gudoomiyaha Baarlamanka oo si weyn ugu xusul duubayey meel marinta heshiiskaasi ay si weyn u kala furfureen gulufkii cuslaa ee xildhibaanada ka biyo diidanaa heshiiskaasi, taasi oo maanta la dareemay.
Gunaanadkii kulankaasi Gudoomiyaha baarlamanka ayaa ku dhawaaqay in heshiiskii Kampala uu sidaasi ku dhaqan galey isla markaana la sii ambaqaadi doono fulinta qodobada ka dhiman.